big merger(big merger) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
फेरि पनि 'नम्बर वान' बन्ने रणनीतिमा एनआइबी, हिमालयनसँग मर्जरको संभावना अधिक
काठमाण्डौ । दुईवटा ठूला लोनका कारण समस्या भोगिरहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक(एनआइबी)ले ती लोन असूलीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएसँगै फेरि पनि नम्बर वान बैंक बन्ने रणनीति बनाएको छ । बैंकिङ उद्योगमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको र यस्तो अवस्थामा बैंकका कतिपय रणनीतिमा समेत आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थालाई आत्मासाथ गर्दै बैंक...
एकैपरिवारको लगानी रहेका बैंकहरु मर्जरमा नगए हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रीको चेतावनी
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एकाघरको लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा नगए सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । काठमाण्डौको कमलादीमा शुक्रबार आयोजित ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरुआत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।...
मर्जरका लागि दवाब दिन छाड्यो राष्ट्रबैंक, गभर्नर नेपालको पालामा केही नहुने
काठमाण्डौ । कुनै बेला बैंकहरुबीच ‘फोर्स मर्जर’ गराउने मूडमा पुगेको नेपाल राष्ट्रबैंक पछिल्लो समय भने सेलाएको छ । ‘फोर्स मर्जर’ गरी देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने र विशेष गरी ‘बिग मर्जर’ गराई वाणिज्य बैंकहरुकै संख्यामा कटौतिको नीति लिन खोजेको नेपाल राष्ट्रबैंक पछिल्लो समय एकाएक सेलाएको हो । पहिला...
मर्जर कार्ययोजना पेश गर्न बैंकहरुलाई ७ दिने अल्टिमेटम, नटेर्नेलाई ‘फोर्स मर्जर’
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमा ‘मर्जर’को निकै नरम नीति ल्याएको राष्ट्रबैंकले भित्रभित्रै बैंकहरुलाई मर्जरका लागि अगाडि बढ्न दवाब दिन थालेको खुलेको छ । राष्ट्रबैंकको नियमन विभागले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई बिहीबार ‘गोप्य सर्कुलर’ पठाउँदै अबको ७ दिनभित्र मर्जरको स्पष्ट कार्ययोजना पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रबैंकले...
क्रसहोल्डिङ खोज्न राष्ट्रबैंकद्वारा बैंकहरुलाई पत्राचार, ‘फोर्स मर्जर’को संकेत
काठमाण्डौ । एउटै लगानीकर्ताको विभिन्न बैंकमा रहेको लगानी खोजी त्यस्ता संस्थालाई ‘फोर्स मर्जर’को प्रयास गर्न राष्ट्रबैंक तातेको छ। राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमार्फत भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि बिहीबार नै २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखी चुक्तापूँजीको...
हिमालयनलाई सिभिल वा बीओके लिन राष्ट्रबैंकको सुझाव, ताकेको थियो सेञ्चुरी !
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’को इस्यूमा एकाएक नरम बनेको नेपाल राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंक लिमीटेडलाई सिभिल वा बैंक अफ काठमाण्डू(बीओके)लाई अक्वायर गर्न सुझाव दिएको खुलेको छ । राष्ट्रबैंकस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार डेपुटी गभर्नरको तहबाट हिमालयन बैंकलाई उपयुक्त मर्जर पार्टनरको रुपमा सिभिल वा बीओकेसँग सहमति गर्न...
मर्जर प्रतिबद्धता पठाउने क्रम ठप्प, जान चाहने पनि रोकिए
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरको विषयमा नरम नीति आएसँगै ठूला बैंकहरुले राष्ट्रबैंकमा मर्जर प्रतिबद्धता पठाउने क्रम बन्द गरेका छन् । मर्जरका लागि तयारी गरिरहेका र संभावित पार्टनरहरुसँग छलफलमा सहभागी भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत नरम मर्जर नीतिपछि निस्क्रिय जस्तै भएका छन् । नेपाल राष्ट्रबैंकमा असार २६ गते भन्दा...
कुमारी बैंकको रणनीति–‘अरुलाई गाभ्ने, अरुमा नगाभिने’
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमीटेड अन्य बैंकमा गएर नमिसिने, बरु बलिया कम्पनीलाई गाभेर ठूलो बैंक बन्ने अभियानमा लाग्ने भएको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजशालालाई दिएको जानकारी अनुसार कुमारी बैंक अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बिलय नहुने, बरु अरुलाई प्राप्ति गरी ठूलो आकारको बैंक बन्ने रणनीतिमा छ। ‘मौद्रिक नीति पनि भर्खरै आएको छ ।...
सेयर स्वाप रेसियोमा सिभिलको प्रभूसँग कुरा मिलेन, हिमालयनसँग संभावना
काठमाण्डौ । प्रभू बैंक लिमीटेड र सिभिल बैंक लिमीटेडका संचालकहरुबीच भएको मर्जर कुराकानी पूर्णविराम लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सेयर स्वाप रेसियो र कर्मचारी समायोजनजस्तो मुख्य मुद्धामै कुरा नमिलेपछि यी दुई बैंकबीचको संभावित मर्जरमा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको स्रोतहरुले जनाएका छन् । केही दिनअघिदेखि यी दुई बैंकका...
मर्जर इस्यूमा बीओके: औपचारिक समारोहमा आलोचना, पत्र पठाएर समर्थन
काठमाण्डौ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नरको ‘बिग मर्जर’ सपनालाई काउण्टर दिंदै बोलेका बैंकर शोभनदेव पन्तले नेतृत्व हाँकिरहेको बैंक अफ काठमाण्डू(बीओके) पनि मर्जर प्रतिबद्धतासहित केन्द्रीय बैंक पुगेको छ। औपचारिक समारोहमा मर्जर नीतिको कटू आलोचकको रुपमा प्रस्तुत भएका...
प्रभू र सिभिलबीच मर्जरको संभावना, छलफल निश्कर्षउन्मुख
काठमाण्डौ । जारी छलफल र वार्तामा कुनै चलखेल भएन र कुराहरु मिलेर गए भने केही दिनभित्रै दुई वाणिज्य बैंकबीच मर्जर सम्झौताको खबर सुन्न पाइने भएको छ । उच्च स्रोतहरुका अनुसार प्रभू बैंक लिमीटेडले सिभिल बैंकलाई प्राप्तिको मोडलमा गाभ्ने संभावना निकै प्रवल बनेको हो । यी दुई बैंकबाट गठित मर्जर कमिटीका अधिकारीबीच पटक पटक कुराकानी भइसकेको...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डद्वारा ‘मर्जर नीति’ अस्वीकार, एनबी बैंकले साझेदारसँग सल्लाह गर्ने
काठमाण्डौ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मर्जर जान नसकिने जवाफ राष्ट्रबैंकलाई पठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि लिखित प्रतिबद्धता मागेकोमा यो बैंकले मर्जरमा जान नसकिने आफ्नो रणनीतिको विषयमा प्रष्ट पार्दै पत्र पठाएको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकले लिने महत्वपूर्ण नीतिप्रति यो बैंकले विगत लामो समयदेखि असहमति जनाउँदै आएको छ ।...
‘मर्जर लहर’: इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सानामा ध्यान, नवील मौद्रिक नीति कुर्दै
काठमाण्डौ । मर्जरको लहरले अहिले देशको बैंकिङ उद्योग तातेको छ । यो क्रममा विशेष गरी वाणिज्य बैंकहरुले बनाउने रणनीतिमा धेरैको ध्यान गइरहेको छ । हाल देशकै टप बैंकहरुको रुपमा स्थापित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नवील बैंकले समेत मर्जरको विषयमा आफ्नो रणनीति बनाएका छन् । हालै जेविल्स फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको...
गभर्नरलाई बैंकर शोभनदेव पन्तको काउण्टर, उत्तर नचाहेका उनका दुई प्रश्न !
काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई टार्गेट गरी ‘बिग मर्जर’मा जान तीव्र दवाब दिइरहेको छ । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा उनले ‘बिग मर्जर’को विषयलाई सफल बनाइछाड्ने नीति लिएका छन् । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर केही दिनअघि...
मर्जरको लहर: ग्लोबल आइएमईद्वारा ‘मेगा मर्जर’को प्रयास, हिमालयनको कुमारीसँग संभावना
काठमाण्डौ । मेगा बैंकसँग कुरा नमिलेपछि जनता बैंक नेपालसँग मर्जरको प्रारम्भिक समझदारी गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकले अन्य केही वाणिज्य बैंकलाई समेत गाभ्ने गरी छलफललाई अगाडि बढाएको छ । बैंकस्थित उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय ग्लोबल आइएमई र नेपाल बंगलादेश बैंकबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल बंगलादेश र अझै २...
भारतमा कोरोना उपचारमा रेमडेसिविर औषधि प्रयोग गर्न अनुुमति
काठमाण्डौबाट जारी सवारीपास लकडाउनभरिका लागि मान्य हुने